Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ụlọ China Agba Nkume Nkume kpuchie ya - Witop Steel
Home > Ngwaahịa > Okpokoro Nkume agba agba
Okpokoro Nkume agba agba Ndị nrụpụta
Enwere ike ịhazi Okpokoro Nkume agba agba emere na China na ọnụ ala ma ọ bụ ọnụ ala. Ngwaahịa anyị bụ SGS na BV gbaara ezi àmà. Na mgbakwunye, ngwaahịa anyị na -adigide ma anyị na -enyekwa akwụkwọ ikike afọ 10. Witop Steel bụ ndị nrụpụta na ndị na -ebubata ngwaahịa na China na ndị ama ama Okpokoro Nkume agba agba. E wezụga, anyị na -akwadokwa nnukwu nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na m nye iwu ugbu a, ị nwere ya na ngwaahịa? n'ezie! Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga -enye ọ bụghị naanị nlele efu kamakwa ndepụta ọnụahịa na nkwupụta. Ọ bụrụ na m chọrọ ịre ahịa, ọnụ ahịa ole ka ị ga -enye m? Ọ bụrụ na nnukwu ọnụ ahịa gị buru ibu, anyị nwere ike ịnye ọnụahịa ụlọ ọrụ. A nabatara gị ka ị bịa ụlọ ọrụ anyị ịzụta ihe ọhụrụ, ego mbelata na ogo dị elu Okpokoro Nkume agba agba. Ị nwere ike ijide n'aka na ịzụta ngwaahịa mbelata n'aka anyị. Anyị na -atụ anya ka gị na gị rụkọọ ọrụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ugbu a, anyị ga -aza gị n'oge!